Door-roonihii Da'dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir)(1956kii - 1987kii)
You are here: Home Home Door-roonihii Da'dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir)(1956kii - 1987kii)
Waa mar kale iyo Bogaggii Taariikhda soo-jireenka ah. Waa mar kale iyo maalmihii qadhaadhaa ee la isku haleelay goobihii naf-hurka iyo halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Halgan hasaasihiisu bilaabmay dhowr iyo toddobaatannadii qarnigii 20aad. Halgan u digo-rogtay mid hubaysnaa ku-sinnaan 6dii Abriil, 1981kii markii London lagaga dhawaaqay ururkii gobannimo-doonka ahaa ee SNM.
Door-roonihii Da'dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir)
(1956kii - 1987kii)
"Warka shalayto nagu soo dhaceen, aad u dhego-beellay,
Denbi-dhaaf shahiid lagu dhintuu, kuugu dhow yahaye,"
Muddo sannad ku beegnayd ka dib ayay saraakiishii ugu horreysay iyo Guutadii 4aad ee Gaaskii Axmed Gurey ee Jabhaddii Soomaali-galbeed ka gudbeen xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Saldhiggii ugu horreeyay ee SNM ayaa laga yagleelay Durya. Saraakiishii ciidan ee ugu horreysay ayaa xuduudda ka tallowday. Hoggaankii Ururkii SNM ayaa isaguna ka soo digo-rogtay qurbihii oo yimid Itoobiya. Iyada oo la isu soo dhammaaday, ayaa halkaa laga bilaabay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd ee sida buuxda ee xarragada lahayd u guulaystay bilowgii bishii Feeberweri, 1991kii oo Gobolladii Woqooyi laga xoreeyay dooxatadii nidaamkii Siyaad Barre.
Maantana ballaysinku waa Bashiir oo ka mid ahaa baashayaashii halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Inta aanan qormooyinkaygan kooban u gondo-degin marka hore aan waxoogaa isa saxo oo is-barraxo. Maansadan 'Dhoobada Hawaas' ee Timacadde ee aan ka soo ergistay ama ka soo xigtayba Tuducan sare, Diiwaankii Maansada Timacadde ee aan daabacay 2006kii, waxay ku taariikhaysnayd 1964kii. Halkaa qalad ayaa ku jira aan ogaaday 2012kii aniga oo Jabuuti kaga qayb-gelayay 40-guuradii qoraalkii far-soomaalida. Berigaa hore ee aan Diiwaanka daabacay waxaan u haystay oo aan aamminsanaa in uu tixdan ka tiriyay dagaalkii Soomaalida iyo Itoobiya dhex maray 1964kii. Bal se, 2012kii waxaan ka ogaaday niman reer Ayshaca ah in uu tixdan ka tiriyay xasuuqii Ayshaca ka dhacay 1961kii. Qodobkaasi waa mid sixitaan ah oo Daabacaadda Saddexaad ee Diiwaanka Maansada Timacaddena ku soo bixi doona, haddii Eebbe idmo. Waa Diiwaan qormay oo daabacaad diyaar u ah, waana kii saddexaad ee aan anigu qof ahaan Timacadde ka qoro. Waxa dheer mid xul ah oo Ingiriisiya oo aan ku koobay maansooyinka caalamiga ama goboleedba ah.
Marka xiga tuducan ballaysin iyo baalallayn ugama dhigin qormooyinkan kooban ee aan Mujaahid Bashiir maamuuska iyo muquunada uga dhigayo oo keliya e', bal se waa tixdii iyo tuducii uu ugu jeclaa Bashiir Maansada Timacadde. Beydka tuducan ugu danbeeya ee ah: "Denbi-dhaaf shahiid lagu dhintuu, kuugu dhow yahaye," eed ku geli maayo haddii aan idhaahdo Mujaahid Shahiid Bashiir afka kama dhigi jirin. Xirsi-xidh iyo belaayo-xijaab aanu marnaba dhigin ayuu u ahaa. Wuxu dhaqan iyo caadaba u lahaa in uu suunka gashado oo isaga oo isku laaban ku xidho Diiwaankii Timacadde ee ugu horreeyay oo xanbaarsanaa 54 maanso oo la daabacay 1983kii. Waqtiyadiisa firaaqada ah, haddii uu helaba kaas ayuu ahaa wixii u soo raaci jiray halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee uu naftiisii qaaliga ahayd u huray isaga oo soddon-jir ku shahiiday Hargeysa dhexdeeda. Waa sidii ay igu yidhaahdeen xogogaalkii ku lammaanaa ee ay inta badan wada socon jireen.
Intaasi ha inoo noqoto hormayn iyo arar dadab-galkeediiba. In badan ayaan ku taamayay in aan mar uun qalinkayga iyo waqtigaygaba u huro mudanka hal-doorradii ummaddan naftoodii u soo sadqeeyay. Maalintaas aan inta badan sugayay, waa taas maanta ina soo martay. Marka Ilaahay qaddaro ayay wax waliba qabsoomaan. Maanta ayaynu doonisteennii iyo qaddarkii Eebbeba isla haynaa. Waxa i dhiirri-geliyay sahankii cilmi-baadhista mowduucan aan u sameeyay oo aan ku helay waxyaabo badan oo togan oo laga dhaqaaqi karo si wax looga qoro shakhsiyaddii la-yaabka lahyd ee Maxamed Ibraahin Xirsi oo magac-halgameedkiisu ahaa Mujaahid Bashiir.
Waxyaabaha ugu mudnaa ee i dhiirri-geliyay waxa ka mid ahaa sawirka ku suntan qormooyinkan ee Bashiir. Ilaahay ka abaal-mariyo e', waxa iigu deeqay ama inoogu deeqdayba Marwo Sahra Maxamed Cajab, xaaskii Damal Cabdilqaadir Koosaar Cabdi oo ahaa Gudoomiyihii 3aad ee SNM, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e'. Waa sawir ku jiray keydkii sawirrada ee Damal Koosaar.
Mujaahid Bashiir, waxa Taliye u ahaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ka mid ah dadkii aanu ka wareysannay. Mar uu ka hadlayay Mujaahid Bashiir iyo Mujaahidiintii ay isugu dhawaayeen waxyaabihii ay aamminsanaayeen, waxaanu ka gunudnay:
"...............Nimankaasi, waxay aamminsanaayeen in cadawga gudaha loogu dhaco oo lagu cabsi-geliyo halka ay joogaanba, ma ay aamminsanayn dagaalkii dibadda laga qaadayey. Waxaa nimanka weheliya oo is-na saddex ku ahaa nin la yidhaahdo Ismaaciil Cabdi Taani oo Sarkaal Boliis ah ahaa oo sheekh ah oo had iyo jeer saddexdoodaas ayaa isku dhinac ahaan jiray oo meel wada seexanayey, iskuna go’aan ahaa."
Waxay ila tahay saddexda qof ee Muuse Biixi sheegayo in aad laba haysaan oo Bashiir iyo Ismaaciil Cabdi Taani ah. Ninka saddexaadna waa Mujaahid Shahiid Axmed Ibraahin oo loo yaqaannay Raage-bidaar kuna shahiiday Xeebta galbeed isaga oo ka tirsanaa Guutadii 99aad. Wuxu halganka ku soo biiray isaga oo ahaa ganacsade watay baabuur Mercedes 19 ah. Inta uu taayirradii ka saaray oo dallacay, ayuu qoriga qaatay oo weliba Taliye u noqday kooxdii hawlaha ugu khatarsan qaban jirtay ee sahanka gudaha.
Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa: "Male rag waa mudacyo afkood." Waxa lagu jiray halgan hubeysnaa oo dibuxoreyn qaran ahaa oo ay SNM horseed ka ahayd. Waxa intaa noo dheeraa in uu ahaa halgan hubeysnaa oo siyaasiya oo weliba lahaa baadi-sooc dadweyne ama ahaaba waxan afka qalaad lagu yidhaahdo ama loo yaqaanno "Guerilla warfare.' Wuxu ahaa dagaal noociisu ku cusbaa dadk
a Soomaaliyeed meel ay joogaanba. SNM, jabhad ahaan waxa ka horreysay oo dagaalkan hubeysan ballaysin u ahayd jabhaddii aan tisqaadin ee SSDF. Waxa intaa weliba sii dheeraa in ay SSDF ku dagaallamaysay qaab millateri ama waxa loo yaqaan 'conventional war' oo aanay marnaba adeegsan qaab-dagaaleed dadweyne. Jabhad hubeysan oo shacbiga ku tiirsanayd ma ay ahayn, bal se waxay ahayd jabhad dadku iyada ku tiirsanaayeen ama wax moodi jireen oo u doonan jireen. Waa sababihii ay u noqotay dimuqraaddi-ka-baxa ee ay digtaatooriyaddu u qabsatay markii danbena u baaba'day.
Waayihii jabhadeed ee ay SNM ku bilaabantay kuna soo af-meertay halgankeedii hubeysnaa ayaa ahaa qaabkaa dadweyne oo ay ku soo caano-maashay in kasta oo xilliyadii danbe dagaalka loo adeegsaday hubka waaweyn oo ay teknikadu ugu badnayd. Ugubnimada noocan dagaal ee cusub ayaa keentay in lagu doodo oo lagu murmo qaabka loo xoreynayo dalka. Codka iyo saamaynta ugu badan waxa iska lahaa saraakiishii ka soo digo-rogatay ciidammadii xoogga dalka ee Soomaaliyeed oo u janjeedhay qaabka dagaal ee nidaamiga ah ama millateri. Waxa se jiray rag badan oo fikirkaa mid ka duwan qabay oo culayska saarayay:
In halganka loo wareejiyo dalka gudihiisa,
In qaabka dagaalku noqdo mid dadweyne oo aan loo iilan ka dagaalka nidaamiga ah ee millateri,
Kaftanno badan oo maadeed ayaa ka dhacay qaababkan dagaal iyo sidii la isugu maan-dhaafsanaa. Abiib-dhagax oo ka mid ah aasasayaashii Guutadii 4aad ee unugga u ahayd ciidammadii xoreynta ee SNM ayaa maalin hawl-gal loo diray meel aan ka fogeyn Gadhka-yogol. Sarkaal aan u malaynayo in uu ahaa Ina Biixi ayaa u dhiibay 'kaartadii' dagaalka oo sawiran. Mujaahid Abiib-dhagax oo ciidanka duulayay kaxaysanayay, ayuu ku yidhi: "Laagtaa ma aragtaa? Xabbad miino ah ayaa ku jirta ee iska ilaali." Mujaahidku 'kaarto' iyo warkeed maqal mooyaan e', ma uu arag. Sahanka wuu dirtaa, waajibaadkana wuu gutaa. Sidaas ayuu u yaqaannaa dagaalka. Mujaahid Abiib oo sawirkan la hor dhigay ka yaabban, ayaa Muuse ku yidhi: "Horto miinadan aad sheegayso meesha ka saar." Wixii meesha joogayba, qosol ayay jaanta wadheen.
Is-maan-dhaafyadii ciidanka iyo saraakiishii millateriga waxa kale oo aan ka xusuustaa dhacdo aan goob-joog ka ahaa annaga oo ku sugnayn Tuulada Gob-yarrey oo ah Tuulada ugu xigta Wajaale marka xagga Jigjiga lagu socdo. Waa xilli ku beegnaa 21kii Oktoobar, 1982kii. Waxay ahayd gelin danbe. Ciidammo ka tirsanaa Gutadii 4aad ee Gaaskii Axmed Gurey oo ahayd unuggii iyo aasaaskii ciidammada xoreynta ee SNM ayaa weerar u darbanayd. Korneyl Aadan Saleebaan Cabdi ayaa xaashi ballaadahan oo 'filip chart' ahayd u dhiibay Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul, oo ciidanka sii kaxaysanayay. Sida dhaqanku yahay, 'kaartadaa' waxa ku sawirnaa awoodda cadowga oo lahayd: Jiibab, Madaafiic, Beebbeeyo iyo taangiyo wixii uu cadawgu haystay ama lahaaba.
Taliye Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul oo aan waxan oo kale hore u arag ayaa yidhi: "Ciidanka ayaa kaxaysanaya?" Waxa loogu jawaabay: "Adiga." Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul, ayaa intaa ka dib yidhi: "Sahankayga aniga ayaa diranaya, qaabka aan u dagaal-gelayana aniga ayaa samaysanaya ee ha la ii sheego keliya waxa loo baahan yahay in la sameeyo ama hawl-galkan lagu fuliyo." Dhuxul maalintaa qaab-dagaaleedkii loo sawiray waxa ku caddaa in uu magaalada Tog-wajaale saddex jiho ka weeraro. Galbeed oo ahayd in uu xaggan Jigjiga kaga tago, xagga Magaalo-cad in uu kaga yimaaddo iyo dhinaca Geed-ballaadh. Dhuxul, wuxu u sheegay nimankii saraakiisha ahaa in dhinacan Jigjiga soo xigaa miinaysan yahay. Dhuxul maalintaa wuxu go'aansaday dhinaca saddexaad ee uu Wajaale ka soo gelayaa in ay noqoto xagga Kalabaydh oo weliba uu isagu unuggaa ku soo hoggaamiyo Tog-wajaale, sidiina waa uu yeelay.
Hadba meersis ayaynu tolaynaaye, maanta ta aynu haynaa waa taariikh-nololeedkii Maxamed Ibraahin Xirsi oo loo yaqaannay ama magac-dagaaleedkiisu ahaa Mujaahid Bashiir.
Taliyayaashii ciidammada xoreynta ee SNM ee sida aadka ah u aamminsana dagaalka dadweynaha (popular war), waxa kale oo aynu tusaalayaal u soo qaadan karnaa hoggaamiyihii weynaa ee Maxamed-cali Faarax oo Jabhaddii Soomaali-galbeed ka soo jeeday dibadahana lagu soo carbiyay. Waxa kale oo tusaale nool inoo noqon karaya Taliye Maxamuud Xaaji Xasan oo loo yaqaannay Mujaahid Hurre oo asalkiisii hore ahaan jiray macallin, beryihii danbena waayaha jabhadeed u tababaray in uu noqdo Taliye ciidan isaga oo ka gaadhay derejada ah Taliye Aag (Sector Commander). 1986kii ayuu Hurre shahiiday, halka Maxamed-calina ka shahiiday 1988kii.
Wax waliba barashadiisa ayuu leeyahay e', duruuftii cusbayd ee jabhadnimo ayaa qasabtay in la irkado ama loo iisho qaab-dagaaleedkii dadweyne (Guerilla), saraakiil badan oo kulliyadihii ciidammada ka soo baxdayna waxay noqdeen Mujaahidiin curis iyo hal-abuurba leh.
Qormadii ku soo noqo. Mujaahid Shahiid Bashiir qiimayntiisa iyo qaddarintiisu maanta ii ma aha. Xaashaa wujuud! Isaga oo nool oo halgamaya ayuu ii qiimaysnaa, weliba waxaan ka mid ahay intii aragtay ee nasiibka u yeelatay in ay sheeko la wadaagto. Waa bilowgii 1987kii. Waxaanu joognay Diri-dhabe. Xafiiskii SNM ee saldhiggaas Raamaale ayaanu Mujaahid Bahiir iyo saaxiibkii oo Khadar Abshir Xuseen la odhan jiray ku kulannay. Dhowr maalmood ayaanu is-aragnay oo wada sheekaysannay. Markaa dilkii Axmed Aadan oo ahaa Taliyihii Nabad-sugidda ee Hargeysa waxa laga joogay maalmo kooban. Maalin maalmahaa ka mid ahayd ayaan Mujaahid Bashiir ka codsaday in uu hawl-galkaas ii qoro. Buug yar oo kuwan dugsiyada carruurtu ku tagto ayaan u dhiibay iyo qalin. Waxaan filayaa in uu saddex ilaa afar bog wax iigu qoray sidii hawl-galkaasi u dhacay. Habeenkaa 19kii Diisambar, 1986kii wixii goobtaa ka dhacay ayuu isku koobay. Hal mar ayaan waraaqahaa sawiray, nuqulkiina waxaan Hotel Kaaraa-mardha hortiisa oo xagga woqooyi-bari ah ugu dhiibay Guddoomiyihii SNM oo markaas ahaa Axmed-siilaanyo oo markaa baabuurkiisii caddaa fuulayay. Warqaddii isirka ahayd ee Mujaahid Bashiir ii qoray waxay raacday oo lagu qaatay sanduuqyadii ciidammada Siyaad Barre ay ka qaateen xaruntii SNM, berigii ay soo galeen, Diisambar 1990kii.
Sidii uu Mujaahid Bashiir iigu qiimaysnaa waxa daliil cad u ah, wiilkaygii iigu dhashay Durya 14/2/1990kii in aan u bixiyay Bashiir. Hooyaday Xaajiya Cibaado Xaaji Abokor oo markaa Hargeysa ka soo qaxday oo Durya nala deggenayd, ayaa iyaduna wiilkan dhashay u bixisay Ayaanle. Saamayntii la yaabka lahayd ee ay Hooyaday qoyska ku lahayd awgeed, magacaygii ma tis-qaadin ee magacii Hooyaday bixisay ayaa tis-qaaday, kamana xumi. Waxaan sheekadan gaaban uga gol leeyahay in aan akhristaha tuso halka uu qof ahaan Mujaahid Bashiir iga taagnaa tan iyo maalintaas.
Intan aan immika diyaarinayay qormooyinkan taxanaha noqon doona ee Mujaahid Bashiir, ayaan xaaskayga Mujaahid Faadumo-cawo weydiiyay Maryan oo ay Bashiir walaalo yihiin oo ay isku yaqaanneen Xaafadda Kood-buur, meel Saldhigga Booliska bari kaga dhejisan. Mujaahid Faadumo-cawo waxay ii sheegtay maalintaas in ay qof ahaan u taqaannay Bashiir oo uu ugu iman jiray gurigayagii Jigjiga. Wuxu ku soo maray maalintan uu u soo ambo-baxayay Hargeysa ee uu shahiiday. Waxay xusuusataa sidii uu ugu faraxsanaa in uu Hargeysa ku socdo. Waxa kale oo uu u sheegay in ay dalka dhakhso u xoreyn doonaan oo si deg-deg ah dalkii loogu wada noqon doono. Waxay intaa iigu dartay in ay aad u dareentay intii yareyd ee uu la joogay sida uu qabyaaladda u nebcaa. Keligay ma aha ee xataa qoyskayga ayaa helay fursaddaa ay Mujaahid Bashiir ku barteen. Qof farxaan ah oo qalbi furan ayuu ahaa sidii ay Mujaahid Faadumo-cawo ii sheegtay.
Maalmahan ayaa iigu horreysay in aan go'aansado in aan Mujaahid Bashir si hagar-la'aan ah wax uga qoro. Horeba hindisuhu wuu iigu jiray, laakiin is-ma aan lahayn macluumaadka aan immika helay oo kale waad helaysaa. Macluumaadkan aan cuskanayaa laba ilood oo muhiim ah ayay ka soo burqadeen:
Xubno ka mid ah qoyskiisa iyo xigto aad ugu dhow,
Dadkii la soo hawl-galay ee ay ciidammada wada ahaan jireen, gaar ahaan kuwii ay ka wada hawl-geli jireen sahankii gudaha ee la yabka lahaa,
Dhalashadii Maxamed Ibraahin Xirsi (Mujaahid Bashiir):
Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi oo loo yaqaannay ama magac-dagaaleedkiisu ahaa Mujaahid Bashiir, wuxu ku dhashay magalada Geed-ballaadh, 1956kii sida uu ii xaqiijiyay walaalkii Cabdiqani oo loo yaqaanno Abaadir. Waxa kale oo iyaduna sidaas aamminsan oo ii sheegtay Maryan oo da' ahaan ku xigtay isaga. Hooyadii waxay ahayd Caasha Sheekh Cabdillaahi Ciise, waxaanay ku dhimatay magaalada Hargeysa muddo immika laga joogo lix sannadood ka hor, sida ay saaka (10/9/2015ka) ii caddaysay Maryan oo aan Hargeysa ku booqday saaka meheraddeeda Degmada Kood-buur ku taal. Waxa kale oo ay Maryan ii sheegtay in aabbaheed Ibraahin Xirsi Kaahin, isaguna ku geeriyooday magaalada Hargeysa, bishii Oktoobar 1993kii.
Qoyska Reer Ibraahin Xirsi
Aniga oo xogtan ka martiyay Cabdiqani Ibraahin Xirsi (Abaadir) oo ay Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) walaalo ahaayeen, bal aan si aad u kooban u dul-marro xubnihii qoyskaas, wax nool iyo wax dhintayba.
Ibraahin Xirsi Kaahin oo odeyga reerku ka tafiirmay ahaa, wuxu ku dhashay Geed-ballaadh, waxaanu noolaa 1909kii-1993kii. Halkaas ayuu ku koray, kuna soo barbaaray. Waxay ahaayeen xoola dhaqato geelley ah. Geel badan ayuu lahaa, waxaanu la dhashay oo ay walaalo ahaayeen Xasan Xirsi Kaahin iyo Maryan Xirsi Kaahin.
Xasan Xirsi Kaahin
Xasan Xirsi Kaahin, wuu dhintay waxaanu ka tegay laba wiil oo kala ahaa Ismaciil iyo Cismaan. Xasan markii uu dhalay labadaa nin ayuu ku dhintay dagaal ka dhacay geelal la kala qaaday oo Ogaadeenka dhex maray. Xaaskiisii oo ahayd Faadumo Maxamed Askar waxa dumaalay Ibrahin Xirsi Kaahin, waxaanu ahaa guurkiisii ugu horreeyay.
Maryan Xirsi Kaahin
Waxa guursaday Gahayr Odowaa, waxaanayy dhashay afar wiil iyo afar gabdhood. Waxay Bashiir xidhiidh fiican lahaayeen oo ila immika reerka ku xidhan Xaashi Gahayr Odowaa oo Mujaahid weyn ahaa.
Cismaan Xasan Xirsi
Xukuumaddii Siyaad Barre ayaa ku toogatay Hargeysa horraantii 1987kii markii gurigiisa laga soo saaray qori AK47 ahaa oo Bashiir ku aasay. Garo' oo waxa Cismaan la tooganayaa dilkii Axmed Aadan ka dib. Wuxu ka tegay afar wiil iyo laba gabdhood oo dhammaantood hooyadood la nool.
Ismaaciil Xasan Xirsi
Ismaaciil waa uu ka weynaa Cismaan. Markii Cismaan la toogtay ayuu dumaalay xaaskiisii oo ahayd Xasna Ceelaabe, waxaanay u dhashay inan keliya waanu nool yahay, waana dhallinyar. Ismaaciil wuxuu dhintay miyiga markii aynu dalka soo galnay.
Caruurtii Ibraahin Xirsi Kaahin
Axmad Ibraahin Xirsi
Curad dhashay 1940kii, wuxu ku dhintay Gabilay 1986kii isaga oo markaa aroos ah. Waxa la sheegay in uu wadnuhu is-taagay. Geeridiisa murugada ka soo gaadhay abbihii Ibraahin Xirsi aad iyo aad ayay u xanuun badnayd. Cabdiqani xanuunkii maalintaas aabbihii gaadhay wuxu ku sifeeyay in uu ku dhawaaday sidii Nebi Yacquub in uu indho-beelo. Waxay ahayd tii ugu naxdinta badnayd ee abidkii soo marta.
Aw-Maxamad Ibraahin Xirsi
Wuxu dhashay 1945kii. Wuu nool yahay, waxaanu deggen yahay Calool-la', waa xaas carruurna weli ma yeelan.
Caasha Ibraahin Xirsi
Waxay dhalatay 1950kii, way nooshahay waxaanay leedahay 13 caruura,
Sadexdaasi isku bah ayay ahaayeen waana bahda waawayn hooyadoodna waa:
Faadumo Maxamad Ducaale Askar,
Waa Bahdii ugu horreysay ee Ibraahin Xirsi Kaahin oo dumaal ahayd. Markaa ka dib ayuu guursaday Bahdiisii labaad oo ahayd Caasha Sheekh.
Ku-biiritaankii Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi ee SNM
Maxamed Ibraahin Xirsi, bilowgii 1984kii ayuu Gebilay yimid, ka-dib markii uu muddo gaaban ku sugnaa dalka Ciraaq. Markiiba wuxu u ambo-baxay magaalada Jabuuti. Ka-dib wuxu u soo xadhko-xidhay xaggaa iyo halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Isaga oo ay isa sii raaceen Mujaahidiin kale oo ay ka mid ahaayeen:
Yaxye Cabdiraxmaan Sheekh Cabdillaahi, Ina-abtigii, Maxamad Ibraahin Geeddi,
Cumar Aadan Cawaale,
Ismaaciil Cabdi Taani,
Dayib Cali Nuur,
Wuxu ku biiray xoogagga SNM, bishii Ogos 1984kii, markaasi oo magiciisii hore uu u beddelay Bashiir Muxumed Yuusuf. Intii aan SNM ka tirsanaa, garan maayo Mujaahid magaciisa beddelay oo magac-dagaal (Nom de guere) samaystay. Waan arkay ama maqlayba Mujaahidiin naanayso kula baxday halgankii hubeysnaa, bal se sidaa Mujaahid Bashiir cid magac-dagaal samaysatay waa ii kow. Waa meelaha aad ka dareemayso ama ka garanaysaba sida uu ugu soo talo-galay jihaad dhab ah oo uu naftiisa ku sadqeeyo in uu galo.
Ka-sokow in uu Mujaahid ahaa, waxa kale oo ka muuqday dhaqan-halgameedkiisii in uu ahaa kacdoon-huriye ama waxan afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo 'Revolutionry' aamminsana oo ku dagaallamay kacdoon iyo gadood dadweyne, sidaana naftiisii ku sadqeeyay. Wuxu ahaa qaab cusub oo horumarsanaa oo aan is-leeyahay malaha SNM, haddii ay halgankaas kuu sii jiri lahayd, waa ay u-digo-rogan karaysay, haddi aanay hoggaan-xumo ku dhicin.
Xilligaa uu Jabuuti uga soo ambo-baxayay ka-qayb-galka halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd, ka-sokow in uu go'aansaday in uu naftiisa huro, Mujaahidiintii ay maalintaa wada socdeen qaar ka mid ah ayaa ii sheegay in af-duubkii diyaaraddii Somali Airlines ee Adis-ababa la soo dejiyay 11984kii ay sii dhiirri-gelisay.
Markii aanu bilownay daabacaadda Qormooyinkan Mujaahid Bashiir ku saabsan ayaanu la kulannay Mujaahid Abshir Nuur oo Kanada ka yimid oo beryahaa ahaan jiray wakiilka SNM ee magaalada Jabuuti, waxaanu noo sheegay oo aanu ka duubnay:
"Alle ha u naxariistee Bashiir markii uu Jabuuti ka soo degay waxa uu haystay waraaqo Jabuuti ah oo ah nooca la yidhaahdo Kaar-dameer oo muwaaddin buuxa ma uu ahayn. Waxa weeyaan qofka sidaas ahi ma codeyn karo lamana dooran karo, laakiin wuxu ahaan karaa muwaaddin ku shaqeysan kara ama wax ku qabsan kara. Warqadda noocaas ah ayuu haystay, ka-dib markii uu damcay ee uu doonay in uu SNM-ta ku soo biro, ayuu xafiiska iigu yimi, waxaana uu igu yidhi ii soo samee Fiisahii aan ku tegi lahaa Itoobiya, magacaygana ha igaga qorin. Waayo? Waxa aan haystaa waraaqahaas Jabbuuti oo way iga xumaanayaan. Ka-dib waxaan ku idhi, waa ok aniga ayaa magac kuu bixinaaya, magacayga ayaana aan magac kaaga dhigayaa magac, markaas ayaan ku idhi adiga waxa lagu yidhaahda Bashiir oo magacayga ayaan magac kaaga dheegayaa sidaas ayaana uu ku dhoofay, kuna yimid dalka markii dambena uu jabhaddii ugu soo biiray.Muddada aanu is-naqaannay horta may badnayn, farsamadiisuna waxa ay ahayd Wastaad, oo markii uu Jabuuti joogayba wastaad ayuu ahaa, wastaadnimo ayuu ku shaqeysanaayey se markii uu aniga ii imanaayey waa uu ka qancay wastaadnimada iyo waxaas oo waxa uu goostay in uu ku soo biro jabhadda, marka runtii wax aqoon ah oo badan isu maanan lahayn, waa uu isu kay sheegay, markii uu isu kay sheegayna waan gartay, marka wixiisana sidaas ayaan ugu bedelay oo aan magaca kalena ugu soo bixiyey, kuna yimi oo uu jabhadda ugu soo biiray Laydh gelinta iyo wastaadnimadana labadaba waa uu ku shaqeynaayey. Bashiir waxkhtigaa uu aniga ii yimi nin dhallinyaro ah dayuu ahaa oo runtii markaaba u muuqday in ay ka soo go’an tahay howshan in uu gallaa oo uu u soo badheedho. Warqaddiina waan raadin, waayo 15kii sanno ee u dambeeyey waraaqahaygii qol ayey ku xidhan yihiin.”
Markii ay Mujaahid Bashiir iyo saaxiibbadii soo gaadheen xarumihii maamul iyo saldhigyadii Jabhaddii SNM, waxa lagu jiheeyay oo ay galeen Dugsigii Tababarka Ciidanka ee Awaare oo ay ii sheegeen in ay ku jireen muddo sagaal bilood ah. Looga-qaateenkii ay wada socdeen oo aan wareystay, waxay ii sheegeen in Mujaahid Bashiir dirawal ahaan loo qaatay, markii uu tababarkii dhammaaday ee ciidankii dhammaystay la kala qaybinayay. Mujaahid Bashiir, waxa kale oo intaa u dheeraa in uu noqday Taliye-xigeenka ciidanka sahanka, kaas oo uu Taliye u noqday Axmed Ibraahin oo loo yaqaannay Mujaahid Raage-bidaar oo hore u ahaan jiray nin ganacsade oo ku shaqaysan jiray baabuur Mercedes ah oo 19 ahaa, kaas oo uu keymihii miyiga ku dallacay, kana door-biday in uu noqdo Mujaahid naftiisa u hura xoreynta dalka iyo dadkaba.
Mujaahidiinta looga-qaateenka ah ee aanu ka wareysannay Mujaahid Bashiir, waxa kale oo ka mid ahaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ay Talis ahaan hoos iman jireen oo ay wada hawl-geli jireen.
Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, oo ka warramayay markii ugu horreysay ee ay Mujaahid Bashiir kulmaan ama is-bartaanba ayaa yidhi:
“.....Bashiir waxaanu annagu isugu nimid Jabhaddii SNM. Wuxu ka yimid Gebilay, waxaanan filayaa in ay ahayd 1985kii. Mujaahidkaasi, wuxu ii yimid isaga oo diyaarsan. Dadka qaar waa la tababaraa, qaarna iyaga oo tababaran ayey kuu yimaaddaan."
Mujaahid Bashiir ma keli ama suke ayuu ahaa markii uu Mujaahid Muuse Biixi Cabdi u yimid? Muuse Biixi oo su'aashaa ka jawaabaya, ayaa yidhi:
".....Ninkaa waxa gacanta ku hayey oo ay saaxiib ahaayeen Mujaahid Axmed Ibraahin oo loo yaqaannay Raage-bidaar. Mujaahid Bashiir ninkaas ayay saaxiib ahaayeen oo ay wada socdeen oo laba nin oo isku nooc ah ayay ahaayeen. Waxay ahaayen niman halganku ka dhab ahaa, niman naf-hurid u yimid oo iyagu 'Commanda-rro' ahaa, iyagu askar ah, Taliyeyaal ah, siyaasiyiin ahaa oo go’aan-qaadasho lahaa."
Marka aynu ku eegno indhaha Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, Mujaahid Bashiir caynkee ayuu u ekaa ama qof caynkee ah ayuu ahaa?
Waa kan Mujaahid Muuse Biixi oo jawaabta su'aashaas inoo baacinayaa, waxaanu markanna yidhi:
"......Markaa ninkaasi wuxu ahaa nin dhuuban oo dadkan la yidhaahdo waa weyd ah. Wuxu ahaa nin dheer oo cas. Mujaahid Bashiir ma uu ahayn nin balwadeed oo waa uu ka duwanaa badanka Mujaahidiinta oo had iyo jeer qaadka iyo sigaarka ku waallaa. Mujaahid Bashiir qaadka wax yar ayuu ka cuni jiray. Ma uu ahayn nin kaftan iyo hadal badan, bal se wuxu ahaa nin ku mashquulsan halganka oo keliya oo aanay waxba u labayn. Isaga iyo Raage-bidaar waxay cajiib ku ahaayeen in aanay marnaba kuugu iman si ay kuu wareystaan oo ay kugu wareeriyaan ama kugu scel-celiyaanba: ‘Maxaa la yidhi?’ Afkoodu, ma uu aqoon weedhaas. Afkoodu wuxu yaqaannay oo qabatimay: '....Qorshe ayaan haynnaa, war sugan ayaanu soo helnay iyo waxaan ku talin lahayn.' Intaa ka dib, waxay kuu soo qaddimaanba, waxay ahayd fikrad dagaal."
Mujaahid Bashiir markii uu saldhigga yimidba, waxa la geliyay tababar yar. Waxa loo diray Dugsi Tababar oo gaar ah oo ay ciidammadii SNM ku lahaayeen meel koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Qabri-bayax ee Kililka 5aad ee Itoobiya ee Soomaalida. Wuxu ahaa dugsi si gaar ah loogu tababari jiray ciidammada loogu talo-galay in ay magaalooyinka ka dagaallamaan ama waxan afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo 'Urban war.' Dhallinyaradii dugsigaa wax ku baran jirtay ama lagu carbin jirayba, Bashiir waa uu ka yar weynaa. Dhallinyaradaa waxa ka mid ahaa Maxamed Weere, Cumar Miino iyo qaar kale oo badan.
Mujaahid Bashiir intii aanu iman dugsigaa Qabri-bayax, qiimayn lagu sameeyay waxa lagu ogaaday in uu u baahnaa dab-ridka oo hubka noocyadiisa kala ah: Baastooladda, AK-47ka, BKM-ka iyo RBJ-7-ka oo uu intaas si fiican u maamulo. Codsigii Mujaahid Bashiir ee xilligaas ayaa u badnaa in uu intaas oo qudh ah uu tababarkooda ka ciil-baxo.
Mujaahid Bashiir waxa lagu wareejiyay si uu u carbiyo Mujaahid Indho-case oo 'Kamaandowsta' ahaa. Waxa kale oo ku lammaanaa Mujaahid Raage-bidaar. Dardaarankii Mujaahid Indho-case la siiyay wuxu ahaa in uu rasaasta u badiyo oo uu inta uu doono u qaado RBJ-7-ka mooyaan e'. Laba maalmood markii ay u baxeen dab-ridka, ayaa waxa Mujaahid Muuse Biixi loo keenay natiijadii.
Baastooladdana waa 90%,
Qoriga AK-gana 100%,
"....Horto, ninkaasi ninka sidaas dagaalka ugu xariifka ah ayuu ahaa, waxaana aan u soo diray dhowr hawl-gal (Mission) oo hore isaga, Raage-bidaar iyo Fooxle. Markii ugu horreeyey sahan gudaha ah ayay soo dhammeeyeen. Waxay soo sugeen yoolalkii aanu doonaynay, waa ay soo noqdeen. Yoolkii hore ee ay ka soo noqdeen waa uu naga dhicisoobay. Mar labaad ayay soo noqdeen. Gaar ahaan, waxaa soo noqday isaga, Raage-bidaar iyo Ismaaciil Cabdi Taanigan nool, ka-dibna waxay soo taabteen badda Bullo-xaar. Waxay ka soo lugeeyeen Durya. Soo-noqodkii labaad waxay soo sahamiyeen meelo aanu hub dhiganno. Hubkii waxay ku aaseen meelo u dhow buurahan ka hooseeya Agabbar. Markii ay laba door geeyeen waxa u qorshaysnaa in halkaa hub badan la dhigo, buuraleydaa la fadhiisto oo dariiqqaa Jabuuti la kala gooyo. Nin basaas ahaa, si uu u ogaaday mooyaan e' oo reeraha meesha deggan ahaa ayaa qoday xabaalihii ka-dibna la baxay hubkii, waxaanu u sheegay ciidammadii Siyaad Barre. Bashiir, Raage-bidaar , Ismaaciil Cabdi Taani, Fooxle iyo Cali-sandheere, waxay go’aan ku gaadheen in ay helaan ninkii hubka la baxay. Inta ay Durya ka soo lugeeyeen ayay raadkiisii gureen, waanay ku guulaysteen in ay helaan.
Tababarkaas, markii uu Mujaahid Bashiir dhammeeyey ilaa saddex, afar jeer oo kale ayaan Hargeysa u soo diray oo sahan iyo yool sugan ah. Saddex ayaa naga khasaaray, kii ugu horreeyey ilaa kii uu ku dhintay."
Axmed Ibraahin (Raage-bidaar),
Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir),
Mooge Xasan Samaawiye,
Maxamed Cali Guuleed (Ina Indho-case),
Magacyadan Mujaahidiinta waxaan ka martiyay oo ii yeedhiyay Nuur Muhindis. Mujaahidiintu saddexdii Baabuurba halkii ayay ku furteen kuwaas oo kala ahaa laba Land-cruiser iyo Xaajiyad 'singeer' lahayd. Hal Land-cruiser oo caddaa Guddoomiyaha SNM ayaa lagu maamuusay, labadii kalena ciidanka ayaa adeegsan jiray. Wax khasaare ah oo Mujaahidiinta soo gaadhay ma jirin.
Maxamed Oomaar ayaa ma-hadhadan marinaya, waxaanu yidhi: "Waa intii aanu hawl-galku fulin oo cid walba loo baahnaa. Xog iyo waanu u baahnayn. Adduun iyo taakuleyn ayaanu u baahnayn. Siyaabo badan oo kalena in naloo caayo ayaanu u baahnayn. Ayaan-darrda na haystay se waxay ahayd in dadka intiisa badani iska kaayo ilaalinayso oo ay baqanayee. Galab ayay niman dhallinyaro ahaa oo aanu arrin iyo adduunba ka sugaynay nagula ballameen Makhaayadda Ina Garow. Halkii ayaanu sii fadhiisannay oo shaah iska dalbannay. Heeso ayaa ka socday rikoodh Makhaayadda ka shidnaa. Si ay wax u dhaceenba nimankii ballantii waa ay nagaga baxeen. Shaahii ayaanu iska cabbaynay annaga oo heesihii iska dhegaysanaynay.
Annaga oo yar niyad-jabsan oo heesihii isku baananayna ayuu soo galay Maxamed Saleebaan Tubeec oo cod Qaraamiya ku qaadayaa. Codkaasi in uu Aroor ahaa ayaan filayaa. Tuduc ku jiray ayaa ahaa:
"Dhibtayda kuwaa ka dhuumanayow,
Dhirtoo maqashaan i dhaafteen oo,
Dhagaxaa ii damqan laa dhadhaabta ah,"
Mar keliyaa ayaan arkay muuqii iyo dareenkii Mujaahid Bashiir oo is-beddelay. Waxaan arkay isagii oo is-beddelay. Inta aan naxay ayaan markiiba weydiiyay waxa ku dhacay. Waxaanu iigu jawaabay: 'Heestan miyaanad maqlayn innaga ayay inala hadlaysaaye." Wuxu intaa ku dabo-karay ninka Makhaayadda leh inoo weydii oo inooga soo qaad, sidiina waan yeelay oo waan ka soo qaaday si aanu boogaha iyo nabarrada ballan-darrada ugu dheyno uguna baananno."
Waxaynu weli maalaynaa gaaxdii xusuuseed ee Mujaahid Maxamed Oomaar. Waa dhacdo kale oo la yaab leh. Maxamed oo sheekadan marinayaa, wuxu yidhi: "Mujahid Bashiir ayaa fuulay Bas uu is-lahaa Gol-janno u raac. Waa uu iska fadhiistay isaga oo sugayay inta uu buuxsamayo. Bashiir oo fadhiya oo sugaya inta uu Basku buuxsamayo, ayuu mar keliya ku war helay Mujaahid hore uga tirsanaan jiray Unugtiisii Sahanka ee Diibiile oo cadowga isu soo dhiibay ama soo galayba oo siro badan bixiyay. Labadood indhood ayaa si buuxda oo aan mugdi lahayn isugu dhacay.
Bashiir ayaa markii uu ninkii si dhab ah u aqoonsaday, Baskii ka degay oo hortiisa fadhiistay. Gaadh ayuu ka hayay ilaa intii uu Basku buuxsamayay. Wuxu iska ilaalinayay in uu ogaado halka uu Baska kaga degayay. Baastooladdii ayuu cabbaystay, waxaanu go'aansaday haddii uu ka soo dabo-dego in uu qudha kaga jaro. Ilaa intii uu Baski dhaqaaqayay wuu hor taagnaa. Ninku cadow sirtii SNM ee weliba Sahanka nin la soo tallaabay ayuu ahaa. Sidii ayuu Baskii ku dhaqaaqay. Maalin iyo laba ka dib ayaanu aragnay isaga oo la socda Taliyihii NSS-ta oo warbixintii bixiyay. Ninkii aanu hawl-galka ku fulinaynay ayaa meelihii lagu yaqaannay oo dhan beddelay."
Maxamed Shiil Dhidar oo maalmahaa hawl-galkan la sahaminayay ahaa Taliyihii Ciidankii Guulwadayaasha oo ay derejadiisu xilligaas ahayd Gaashaanle ayaan kula kulmay Hudheelka Summer Time 19kii Sebtember, 2015ka. Waa xilli ay saacaddu ku beegnayd ilaa 12.00 saacadood ee duhurnimo. Waxaan hayay tibaax ah in uu wax ka ogaa hawl-galkaas. Waxaan ka codsaday in uu iiga warramo wixii uu ka ogaa ama kala socdayba hawl-galkaas lagu khaarajiyay Axmed Aadan oo ahaa Taliyihii Nabad-sugidda ee Gobolkii Woqooyi-galbeed.
Codsigaas ayaan weydiistay Maxamed Shiil Dhidar. Wuu iga oggolaaday, waxaanu ku deexday:
"Aniga oo habeen habeennada ka mid ahaa gurigayga iska fadhiya oo TV ku daawanaya oo aanay innaba iga qasnayn, ayuu ii soo galay nin SNM ah oo ka tirsanaa kooxdii sahanka ee hawl-galkii Axmed Aadan lagu khaarajiyay. Ninka hore ayaanu isu naqaannay muddo aan fogaynna wuu tallaabay oo SNM ayuu ku biiray. Wuxu iiga sheekeeyay waxay u socdaan isaga oo isla markaana i weydiiyay su'aalo ku saabsan tilmaamaha Axmed Aadan iyo meelaha laga helo.
Intii aan u tilmaami karayay ama u sheegi karayay ayaan u sheegay. Aad ayaan u naxay oo waxaan is-idhi malaha waxani inta ay fashilmaan ayaa khsaare badani ka dhalan doonaa. Aniga oo sidii u anfariirsan ayaan ninkii ku idhi wixii immika ka danbeeya waxaad la xidhiidhi doontaa Dhamme Maxamuud Ibraahin Guuleed oo aan kugu ballamin doonaa.
Maalin ama laba maalmood ka dib aniga oo xafiiskaygii fadhiya ayaa waxa ii soo galay nin go' shaal ah hagoogan. Ku-ye: 'Ma i garanaysaa?' Aniguna: 'Maya', ugu jawaabay. Ku-ye: 'Waxaan ahay Bashiir. Tilmaamihii aad na soo siisay ayaa nagu fillaan waayay. Waxanu u baahannay tilmaamo intaa hore ka badan.' Naxdintii hore bikh. Ninkan xafiiska iigu soo galay ee Bashiir go'a waxa uga hooseeya oo aan halacsaday: laba bambo iyo baastoolad.
Waxaan ku idhi wixii aan war idin siin karayay waan idin siiyay oo waxba idin kama hagran. Wuxu igu yidhi: 'Waxaan u baahanahay in aan arko oo la i tuso qofka aan dilayo, maxaa yeelay ma doonayo in aan ku qaldamo cid kale oo aan waxba galabsan' Yaabkii iyo amankaaggii ayaa igu sii batay. Annaga oo jiq isku ah ayuu noo soo galay Dhamme Maxamuud Ibraahin Guuleed. Sheekadii ayaanu si deg-deg ah ugu marinnay.
Ku-ye: 'Ina soo saara aniga ayaa soo tusaya e.' Baabuurkii Dhamme Maxamuud ayaanu wada raacnay. Hargeysa Kilaab markii aanu maraynay, ayuu Dhamme Maxamuud baabuurkii dib u soo kala fireeyay oo yidhi: 'Aniga iyo Bashiir ayaa raadinayna Axmed Aadan e', adigu gaadhigaagii ku noqo. Sidii ayay isku raaceen, aniguna aan xafiiskaygii iyo gaadhigaygii kaga hadhay. Iyaga oo guriga shaqaalaha hormaraya oo Axmed Aadan raadcaynaya, ayuu kaga soo baxay guriga shaqaalaha isaga oo markaa soo dhammaystay shir uu ku jiray. Waxoogaa ayay barbar carareen, ka-dibna wuu u joogsaday, iyaguna waa ay dhinac is-taageen. Dhamme Maxamuud ayaa inta uu si wanaagsan Axmed Aadan u salaamay ku yidhi: 'Meel kasta oo ay joogaanba, dadku waa kaa raalli. Aad ayaa laguugu han-weyn yahay.' Intaa haddii u ritay ayuu jalleecay Mujaahid Bashiir oo gaadhiga la fuushanaa, waxaanu ku yidhi: 'Waa kan ninkii Axmed Aadan ee aad ammaanaysay.' Mujaahid Bashiirna si fiican ayuu indhaha uga buuxsaday, ka-dibna waa ay kala dhaqaaqeen."
Axmed Aadan wuxu ahaa Taliyihii Nabad-sugidda ee Gobolka Woqooyi-galbeed. Wuxu ahaa nin khatar iyo halisba ku ahaa halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. Wuxu ahaa nin nidaamkii uu ka tirsanaa ee Siyaad Barre 100% daacad u ahaa si la yaab lehna ugu adeegayay. Axmed Aadan, dhinaca kale marka aad ka joogsato, wuxu ahaa nin dadka aad iskaga dhaadhiciya oo dhulka isu dhiga naxariis badanna u muujiya. Dadweynuhu iyaga oo daalacanayay wejiga wanaagsan ee uu tusayo aad ayay ugu han-weynaayeen oo aanay u haysan ama aamminsanaynba in uu yahay ka boqnaha jaraya.
(La soco, haddii Eebbe idmo)